Ikhiqizwa kanjani imvula eneasidi: izici nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Omunye wemiphumela emibi kakhulu yokungcola komoya yimvula ene-asidi. Kuyinkinga enkulu yemvelo ebangelwa yimisebenzi yezimboni zabantu. Yize ama-movie amaningi ungazibona izinhlekelele ezidalwe yile nto, ngoba abantu abazi Ikhiqizwa kanjani imvula eneasidi.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela ukuthi imvula ene-asidi yenzeka kanjani nokuthi iyini imiphumela yayo.
2 Ikhiqizwa kanjani imvula eneasidi
3 Imiphumela yabantu nemvelo
4 Izixazululo zemvula ene-asidi
Lolu hlobo lwemvula luhlobene nokungcola komkhathi ngoba lwakhiwa ukuxhumana komswakama womoya ne-sulfur dioxide, isulfure trioxide namanye ama-nitrogen oxides akhona emkhathini. Ukuhlungwa kwala magesi kuyanda ngemisebenzi yabantu. Ngaphandle kwalokho, imvula ene-asidi izokwenzeka ngaphansi kwezimo ezithile ezikhethekile, ezifana nentuthu ekhishwe ngesikhathi kuqhuma intaba-mlilo.
La magesi aqhamuka emikhiqizweni efana no-oyela, ezinye izibi, intuthu yasefemini kanye nokuhamba kwezimoto. Lesi simo sesibe yinkinga emhlabeni ngenxa yemvamisa yaso ekhulayo. Kubanga ukonakala kwezinto zemvelo nengqalasizinda yomuntu yokufakelwa.
Ukwazi ukuthi kungani kunomthelela omubi kulezi zinto zemvelo nezenziwe ngabantu, kufanele siqonde ukuthi imvula ene-asidi ikhiqizwa kanjani. Mayelana nemvula ene-asidi, kungashiwo ukuthi imbangela eqondile yokungcola kwemvelo yimisebenzi yabantu efana ukusebenza kwamafemu, izindawo zomphakathi nokufudumeza izindlu, izikhungo zokuphehla ugesi, izimoto nezinye izinto.
Kukholakala ngokujwayelekile ukuthi lapho sikhuluma ngemiphumela yemvula ene-asidi, sikholwa ukuthi akusiyona imbangela yalesi simo. Eqinisweni, inani lezinto ezikhishwa yizimboni emkhathini lihlukile kunenani lezinto ezikhishwa ngumuntu othize. Kodwa-ke, kuyiqiniso futhi ukuthi kunabantu abaningi emhlabeni kunezimboni.
Lokhu kusenza sicabange kabusha ukuthi ngabe le miphumela idalwe isenzo sayo yonke into isiyonke. Khumbula, lesi simo iqukethe isikhutha, okungaba yiqhwa, iqhwa nenkungu. Endabeni yenkungu, ibizwa nge-acid fog futhi ingadala nezingozi empilweni uma uphefumula.
Konke lokhu kwenza amanzi abe ne-acidic kancane. I-pH yamanzi emvula imvamisa iba ngu-5,6, kepha i-pH yemvula ene-asidi imvamisa iba yi-5 noma i-3 uma ine-asidi kakhulu.. Ukuyakha, amanzi aqukethwe emoyeni ahlangana nenhlanganisela yamagesi esishilo ekuqaleni. Yila magesi ahlangana namanzi akhiqiza i-sulfuric acid, okwenza amanzi emvula abe ne-asidi eningi. Kwakhiwa namanye ama-acid amabili, njenge-sulfurous acid ne-nitric acid. Lapho la manzi ane-asidi amaningi ewa, aqala ukucekela phansi imvelo akuyo.
Imiphumela yabantu nemvelo
Manje sizobhekisisa ukuthi kwenzekani lapho imvula eneasidi iqala ukuna. Iwela emhlabeni, emanzini, emahlathini, ezakhiweni, ezimotweni, kubantu, njll. Ngalokhu, sesingasho vele ukuthi imvelo isiyonke isiwohlokile.
Ukungcola okukhishwa ngokushiswa kwemikhiqizo kaphethiloli akugcini nje ngokungcolisa indawo lapho kukhiqizwa khona, kepha futhi kungahamba amabanga amade nomoya, kuze kube yizinkulungwane zamakhilomitha. Ngaphambi kokuhlanganisa nomswakama, iba i-asidi futhi iwele njengemvula. Yize ibizwa ngokuthi yimvula ene-asidi, le mvula ingenzeka ngesimo seqhwa, isichotho noma inkungu. Konke lokhu kusitshela ukuthi ukwakheka kwemvula ene-asidi kungenzeka kwenye ingxenye yomhlaba bese kwehlela kwenye indawo.
Iqiniso lokuthi izwe elingangcolisi kufanele lihlupheke ngemiphumela yelinye elenzayo, yilokho lelo lizwe okungafanele likuvumele. Ngaphezu kwanoma yini, ngoba le yimiphumela yemvula ene-asidi nokuthi yimaphi amazwe okungeyona asolwa ngokukhishwa kwabanye azohlupheka:
I-acidification yamanzi: Kungumthelela emvelweni odala umonakalo omkhulu kuzo zonke izinhlobo zezinto eziphilayo emikhakheni ye-quantum neyasemhlabeni. Kokubili izitshalo nezilwane kuyathinteka futhi amanzi awasaphuzi. Konke lokhu kuholela ekwandeni kokwelashwa okulandelayo nokwenyuka kwezindleko zamanzi okuphuza.
Kubangela ukulimala okukhulu kohlaza: zonke izindawo zehlathi namahlathi konakele ezingeni lezimbali nezilwane.
Khumbula ukuthi ngesikhathi inqubo ye-asidi yemvula ixuba ezinye izingxenye zamakhemikhali nezinye esevele zikhona enhlabathini. Leli qiniso ligcina ngokuntula inhlabathi yezakhamzimba. Ukulandelana okuyinhloko kwalokhu ukuthi izitshalo eziningi ziyafa futhi izilwane ezizondla kulezi zitshalo zigcina ngokufa ngenxa yomphumela wochungechunge lwe-trophic.
Ukubhubhisa impilo yazo zonke izinto ezincane eziphilayo ezibhekene nokulungisa i-nitrogen. Lokhu kubangela i-nitrogen eningi emvelweni.
Kulimaza zonke izindawo zokufakelwa ezenziwe ngumuntu, kudala umphumela owonakalisayo ngokuhamba kwesikhathi ezintweni ezinjengokhuni, ipulasitiki namatshe. Kumele ubone nje ukuthi izifanekiselo eziningi nezikhumbuzo zonakaliswe kakhulu ngokuwa kaningi kwemvula ene-asidi ezindaweni ezingcolile.
Ama-asidi akhona emvuleni nawo abanga ukwanda komphumela wokushisa.
Izixazululo zemvula ene-asidi
Ngokunikwa le miphumela, kunezinye izixazululo ezingaba khona ezifana nalezi ezilandelayo:
Yehlisa amazinga we-sulfur nitrogen emissions emafektri, ezimotweni, ekushiseni, Njll
Khulisa amandla avuselelekayo futhi uthuthukise ukusebenza kobuchwepheshe ukwehlisa ukukhishwa emkhathini.
Khulisa ukusetshenziswa kwezithuthi zomphakathi ukunciphisa ukusetshenziswa kwemoto yangasese.
Ukunciphisa ukusetshenziswa kukagesi emakhaya
Ukunciphisa ukusetshenziswa kwezinto zamakhemikhali ezitshalweni nakwezolimo.
Tshala izihlahla eziningi
Fundisa bonke abantu ukuthi bafake imikhuba engcono yokuphila engangcolisi kangako.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuthi imvula ene-asidi yenzeka kanjani nokuthi iyini imiphumela yayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ikhiqizwa kanjani imvula eneasidi